အကောင်းဆုံး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ အင်တာနက်ဖိုရမ်
အကောင့်တစ်ခုအမည်အား (သင့် subdomain) အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်သင့် e-mail လိပ်စာသယ်။ သင့်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူ password ကိုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်ဆိုတာသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှမည်သည့်အခါကမျှ spam (သို့) ကြော်ငြာကိုဘယ်တော့မှရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်၏အဓိကစီမံခန့်ခွဲသူနှင့်အတူအီးမေးလ်ကသင်၏ spam ဖိုင်တွဲတွင်စကားဝှက်ကိုရလိမ့်မည်။
ဒီနေရာတွင်ထက်နည်း2မိနစ်၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့ဖိုရမ်ရ! သင့်ရဲ့ဖိုရမ်သင့် website ၏အရောင်ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ဖိုရမ်များသြစတြီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏က high-performance ကို server များပေါ်တွင် run နေကြသည်အဖြစ်ဆာဗာရှိသည်မဟုတ်လိုအပ်ပါတယ်! အခမဲ့ဖိုရမ်များအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင် Create! ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ သင့်ရဲ့ဖိုရမ်နှင့်ရပ်ရွာဂရုစိုက်ပါ, ကျနော်တို့နည်းပညာဂရုစိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံမှုဖိုရမ်အားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုအတူကူညီပေးဖို့ပျော်ရွှင်။ န့်အသတ်ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များပုဂ္ဂိုလ်ရေး domain name ကိုနှင့် e-mail ကိုလိပ်စာများအဖြစ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အစွမ်းထက် hosting အတွက်အတူအခမဲ့ဖိုရမ်၏အားသာချက်ကိုယူသွားပါ!
Account Name ကို [a-z နှင့် 0-9]: .internetforum.info
ဒီနေရာတွင်ထက်နည်း2မိနစ်၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့ဖိုရမ်ရ! သင့်ရဲ့ဖိုရမ်သင့် website ၏အရောင်ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်ဖိုရမ်များသြစတြီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏က high-performance ကို server များပေါ်တွင် run နေကြသည်အဖြစ်ဆာဗာရှိသည်မဟုတ်လိုအပ်ပါတယ်! အခမဲ့ဖိုရမ်များအတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင် Create! ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ သင့်ရဲ့ဖိုရမ်နှင့်ရပ်ရွာဂရုစိုက်ပါ, ကျနော်တို့နည်းပညာဂရုစိုက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံမှုဖိုရမ်အားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများကိုအတူကူညီပေးဖို့ပျော်ရွှင်။ န့်အသတ်ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များပုဂ္ဂိုလ်ရေး domain name ကိုနှင့် e-mail ကိုလိပ်စာများအဖြစ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အစွမ်းထက် hosting အတွက်အတူအခမဲ့ဖိုရမ်၏အားသာချက်ကိုယူသွားပါ! စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား Imprint ထံမှသက်ဆိုင်ပါသည်။